Goethe. Ukukhumbula utata wobuRoma baseRoma | Uncwadi lwangoku
Umzobo kaGoethe, nguJohann Heinrich Wilhelm Tischbein.
UJohn Wolfgang von Goethe wabona ukukhanya kwayo kokuqala 28 Agasti 1749. Umntu onolwazelelelo Utata wobuRoma baseRoma Wayeyindoda ekrelekrele eguqukayo. Imbongi, umbhali wenoveli, umbhali wemidlalo kunye nososayensi, ababhali abanempembelelo enzulu, iingcinga, abaqambi kunye namagcisa esizukulwana esilandelayo kunye neendawo zonke. Namhlanje ndibhiyozela isikhumbuzo sayo sokuqaqambisa Imibongo emi-4 kunye namabinzana angama-20.
2.1 Ubusuku obuhle
2.2 Ukutshona kwelanga kobomi
2.3 Uthando olungaphumliyo
3 Amabinzana e-20
UJohn Wolfgang von Goethe Ngokuqinisekileyo yenye yezona mbongi zibalaseleyo nezaziwayo, ababhali bemidlalo yeqonga kunye neenoveli zaseJamani kunye Ummeli omkhulu wentshukumo yothando. Umsebenzi wakhe uchukumisa iintlobo ezinje isihobe, iinoveli okanye idrama. Uye wakhulisa imveliso yesayensi kwizihloko ezinje izityalo okanye ithiyori yemibala. Kwaye kwanefuthe kuwo onke amabakala okucinga, uncwadi kunye nobugcisa ngokubanzi.
Phakathi kwemisebenzi yakhe eyona nto ibalulekileyo neyaziwayo kwihlabathi liphela ngumdlalo weqonga Ubuqaqawuli, yeyona iconic kwaye inefuthe, umthombo wokuphefumlelwa kunye nento yeenguqulelo ezininzi. Kwaye iinoveli zakhe ezimele kakhulu Iimpazamo eziLungileyo zikaWerther o UWilhelm Meister. Kwimibongo kufanelekile ukuqaqambisa eyakhe I-Prometeo kunye UHermann noDorotea okanye zabo Ubungangamsha baseRoma.
Ifani yakhe inika igama Iziko GoetheIziko elijongene nokusasaza inkcubeko nolwimi lwaseJamani kwihlabathi liphela. Zezi 4 yemibongo yakhe emifutshane ukuyikhumbula kwaye Amabinzana e-20 ngaphezulu.
Ndimele ndishiye indlu
apho intanda yam ihleli khona,
kunye nenyathelo elibi
Ndizulazula kwihlathi elomileyo;
inyanga ikhanya kumagqabi,
khuthaza umoya opholileyo,
kunye ne-birch, ejinga,
ivumba lalo lenyuka laya kuye.
yobusuku obuhle behlobo!
Kuhle kangakanani apha
oko kusizalisa ngovuyo!
Umsebenzi onzima ukutsho! ...
Ndingobusuku obuwaka ngoluhlobo
enye nomhlobo wam.
Ukutshona kwelanga kobomi
kwiindawo eziphakamileyo zemithi
iintaka ezincinci zithe cwaka ehlathini.
Ngomoya ovuthuzayo ndiyahamba!
Phakathi kwemiqolomba ebengezelayo,
Kumaza alukhuni ndihamba,
Njalo phambili, njalo!
Uxolo, ukuphumla, kuhamba.
Kukuba konke kube lula
Yiba likhoboka lokulangazelela,
Apho intliziyo ivalela intliziyo,
Kubonakala ngathi bobabini bayatsha
Kubonakala ngathi bobabini baziva.
Zaba lilize zonke ezo ngxabano!
Isithsaba sobomi esiqaqambileyo,
Ulonwabo olubi ...
Uthando, nguwe lo!
Makhe uthi ndlela-ntle ngamehlo akhe,
okoko ukuyithetha khanyela imilebe yam!
Ukuvalelisa yinto enzulu
nokuba yindoda, njengam, inomsindo!
Kubuhlungu kule trance kusenza nokuba
yothando obona bungqina bumnandi kunye nobumnene;
Ingqele ndirhalela ukuncamisana nomlomo wakho
vula isandla sakho, ndibambe.
Ukuphululwa kancinci, ngelinye ixesha
ukukhohlisa nokubhabha, ndiyayithanda!
Kwakuyinto efana ne-violet yangaphambili,
oko kwaqala egadini ngoMatshi.
Andisayi kuphinda ndinqumle iiroses ezinuka kamnandi
ukuba ubumiselele ibunzi lakho kunye nabo.
Frances, kusentwasahlobo kodwa kuyawa
kum, ngelishwa, kuya kuhlala kunjalo.
Ukungonwabi okuphezulu, njengolonwabo oluphezulu, kuguqula ukubonakala kwazo zonke izinto.
Umntu uhlala ekholelwa ukuba ungaphezulu kunaye, kwaye uzijonga engaphantsi kokuxabiseka kwakhe.
Ukucinga kunomdla ngaphezu kokwazi, kodwa kuncinci kunomdla kunokujonga.
Kulungile ukuba uyifumane, kodwa kungcono ukuyigcina.
Ukucinga kulula, ukwenza kunzima, kwaye ukubeka iingcinga zakho kwisenzo yeyona nto inzima emhlabeni.
Umzekelo obalaseleyo wenza ukuba kube nzima ukwenza izinto ezinzima.
Sakheke yile nto siyithandayo.
Impindezelo ekhohlakeleyo kukudelela konke ukuziphindezela
Akukho mntu uyazi ukuba wenza ntoni ngelixa esenza ngokuchanekileyo, kodwa into engalunganga umntu uhlala eyazi.
Umntu wenziwa ziinkolelo zakhe. Njengoko ekholelwa, kunjalo.
Uthando yinto efanelekileyo; umtshato, into eyinyani; ukudideka okwenyani kunye nokuhle akunakuze kohlwaywe.
Nabani na owenza okulungileyo ngokuzincama uhlala ehlawulwa ngenzala.
Into ongenakuyiqonda akunakuba nayo.
Akukho nto ingabalulekanga emhlabeni. Yonke into ixhomekeke kwinqanaba lokujonga.
Umntu wenziwa kumaza alwayo ehlabathi.
Ingqondo yomntu ayikhawulwanga kwimida.
Sonke silinganiselwe kangangokuba sihlala sikholelwa ukuba silungile.
Izono zibhala imbali, kulungile ukuthula.
Indoda eyonwabileyo emhlabeni ngumntu owaziyo ukwamkela ukufaneleka kwabanye kwaye angakuvuyela ukulunga kwabanye ngokungathi yeyakhe.
Ezinye iincwadi zibonakala ngathi azibhalelwanga ukuba zifundwe, kodwa zazise umbhali wazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » Goethe. Ukukhumbula utata wobuRoma baseRoma